Okwu Mmalite nke Schọpụta Mmasị - Geofumadas
Choputa ikike nke ime ihe anya. Ahụmịhe, nwee mmetụta, nyocha ma hụ ihe niile ị nwere ike ịme na-anọghị.
Sensing Remote (RS) nwere usoro nke njigide dịpụrụ adịpụ na nyocha ozi na-enye anyị ohere ịmara ókèala ahụ na-anọghị ya. Otutu ihe nchoputa nke uwa n’eme ka anyi lebara otutu ihe di mkpa banyere gburugburu anyi, ala na ala.
Studentsmụ akwụkwọ ga-enwe nghọta siri ike banyere ụkpụrụ anụ ahụ nke Remote Sensing, gụnyere echiche nke radieshon electromagnetic (EM), ha ga-enyocha n'ụzọ zuru ezu na njikọta nke rad radies ikuku na ikuku, mmiri, ahịhịa, mineral na ụdị ndị ọzọ. Ala site na ebe dị anya nghọta. Anyị ga-enyocha ọtụtụ ubi ebe enwere ike iji Senting Sensing, gụnyere ọrụ ugbo, ala, ala ala, hydrology, oke ohia, gburugburu ebe obibi na ọtụtụ ndị ọzọ.
Usoro ihe omume a na - eduzi gị ka ị mụta ma mejuputa nyocha data na Nweta Ime Ime Nweta ma melite nkà nyocha nke geospatial gị.
Ghọta echiche ndị dị mkpa banyere Sistemụ Siri.
Ghọta ụkpụrụ arụ nke na-akpata mmekọrịta na radieshon EM na ọtụtụ ihe mkpuchi ala (ahịhịa, mmiri, mineral, nkume, wdg).
Ghọta otu ihe ikuku dị na gburugburu nwere ike isi metụta mgbaama site na ikpo okwu ndị dịpụrụ adịpụ na otu esi emezi ha.
Nbudata, bu ụzọ na nhazi ihe onyonyo.
Ngwa anya ihe mmetụta.
Ihe omuma atu nke ihe ntinye uche di anya.
Mụta nsachapụ ihe nkedo na sọftụwia na-akwụghị ụgwọ
Ihe omuma banyere uzo nke ihe omuma nke Geographic.
Onye ọ bụla nwere mmasị na Nnukwu Mmetụta Ntinye ma ọ bụ iji data gbasara oghere.
Mee QGIS 3 arụnyere
Studentsmụ akwụkwọ, ndị nyocha, ndị ọkachamara na ndị hụrụ GIS na Remote Sensing ụwa n'anya.
Ndi okacha mara n’ime oke ohia, gburugburu ebe obibi, ndi mmadu, ihe omuma ha, ala, ihe ndi ozo, ime obodo, njem, oru ugbo, ihe omumu ihe ndi ozo.
Onye obula choro iji data gbasara ohere dozie ihe gbasara ala na gburugburu ya.
Previous Post«Previous Usoro ETABS maka Nhazi Injin - Ọkwa 2
Next Post Okwu Mmalite iji chepụta usoro iji Ansys workbenchNext »